HS:-Inkasta oo ay sida warar sugan nagu soo gaarayaan uu r/wasaare Saacid diyaariyey warqadiisii iscasilaada ayna kaliya warqada ka dhiman tahay saxiixiisa taasi oo laga yaabo inuu la sugayo daqiiqadaha ugu danbeeya ee codka la gelin doono mooshonka ka yaalo.
Hadane bal aan dul marno qodobada ugu muhiimsan ee u keenay fashilka muuqda.
1- Inta la xasuusto taariikhda siyaasada Soomaaliya lama sheegin r/wasaare uusan dhinaciisa taagneyn madaxweynahii soo magacaabay oo mooshin baarlamaan ka bad baaday aad ayeyna ugu hoos baxday inuu ilaa mudanayaashu sidan u galaan is gaarsiiyo.
2-Tirada mooshinka ka keentay oo aad u badan oo waliba inta is qortay ee mowqifkooda cadeysatay waxaa ka daran rag siyaasada mudo ku soo jiray oo arinta hoos ka wada kuwaasi oo qaarkood maanta u aamuseen hadii berito loo codeeyo mooshinkiisana mudo wuu ka sheegeyn doonaa waayo mudanayaasha ku dhegen waa kuwo aad u diyaarsan xitaa marka ay hadlayaan waad dareemeysaa in ay kalsooni ka muuqato marka loo eego tirada r/wasaaraha difaaceysa oo aad u yar fowdona wax ku keeni waayey.
3- Gudoonka baarlamaanka iyo kuxigeenadiisa oo aysan arinta ka aheyn ciyaar ciyaar aadna isha ugu haya mudanahii fowdo isku daya talaabo culus ka qaadayo taasi oo aad u cabsi gelisay xildhibaano buuq iyo fowdo ay u qorsheyneyd maalmahii tagay.
4-R/Saacid rajo danbe lagama qabo si kasta oo uu kursiga iskugu dhejiyo siyaasada Soomaaliya inaba ay malaayiin Soomaaliyeed u jeedaan amaba ay siyaasadiisa horboodayaan Rag horey u fashilmay Soomaaliduna ay xasaasiyad ka qabaan sida Cali Khalif iyo Cali Geedi aad ayeyna ugu faraxsan yahiin in lala fashilmo.
5-R/wasaare Saacid xaalkiisa ma qurux badna waxeyna u muuqataa in uu baarlamaanka shaqada ka ceyrin doono kedibna bal isagu beesha caalamka iyo Soomaaliweyn hortooda haka dhaho baarlamaankii ansixiyey isaga markii la magacaabay ima ridi karaan taasi oo hadane ku noqon doonta wajigabax kale oo siyaasadeed.
Walow ay talooyin badan soo seegeen r/wasaare Saacid hadane wararka aanu caawa heleyno waxey isku bed bedelayaan saacad saacad hadane warar xaqiiqda u dhaw ayaa sheegaya inuusan dooneyn in uu sugo ilaa mudanayaashu mooshinka ka yaalo u codeeyaan uuna warqad hsda diyaar ah saxiixo doono madaxweynahane u geyn doono si loo baajiyo mooshinka.
Warar kale waxey sheegayaan in uu xaqiiqada ogyahay laakinse maalmahii tagay ku mashquulsanaa aruurinta docuents fara badan iyo qancinta shirkado u qorsheysnaa inuu heshiisyo la galo oo miiska u saarnaa xaalada hada taagan oo uusan filaneyn awadeed.
Warar kalena waxey sheegayaan in ay xitaa gursiga xildhibaanimada dib ugu celibeyso beesha ay ka soo jeedo xaaskiisa iyasa iyo r/wasaarahuna ay sidaas mar qura siyaasada uga baxayaan walow shaqaalaha xafiiska r/wasaaraha badankood siiba kuwooda qurbaha ka tagay bilaabeen iney shaqooyin kale raadsadaan qaarne ay sugayaan saacada ugu danbeysa ilaa au shaqo weydiistaan r/wasaaraha bedeli dona isaga mustaqbalka dhaw.
Isku soo duuboo mudanayaal badan sida ay mediyaha uga hadlayaan r/wasaare Saacid ulama jiraan waxaadne moodaa inba lagu heshiiyey fashilkiisa.xildhibaano uu horboodayo Cali Khalif ayaa lagu soo waramayaa iney doonayaan iney buuqaan maalinta berito ah hayeeshee TV-ka qaranka ayaa goob joog ahaan doona si bulshada loo tusiyo midabka rasmiga ah ee r/wasaare Saacid kuwa difaacaya oo hada ku soo aruuray 35 ilaa ugu badnaa 39 mudane oo waliba berito hadii cod looqaado ay badankood u aamusi doonaan.
I'm sorry what happened the greatman.
· admin on December 01 2013 12:11:37 · 0 Comments · 1555 Reads ·
14,667,548 unique visits